Sezilamaviki Amathathu Zitshengisela Ezaziyizisebenzi zeGMB
Nhlolanja 23, 2016
Ezaziyizisebenzi zeGMB esezilamaviki amathathu zilala phandle kwamasango eGMB
Sekungamavhiki amathathu ezaziyisebenzi zenkampani kahulumende yeGrain Marketing Board zilala phandle kwamasango esigodlo sale inkampani eHarare inkokheli ingazihluphi ngalaba bantu abathi bafuna ukubhadalwa iholo labo abangalinikwanga lapho begunyulwa emsebenzini.
Ezaziyizisebenzi zeGrain Marketing Board zilele phandle kwamasango ale inkampani eHarare
Lezi zisebenzi zithi zifuna imali yazo ngemva kokuba zimiswe umsebenzi nyakenye, kulandela isinqumo se Supreme Court, esivumela umqhatshi ukwenze lokho ngemva kokunikeza isisebenzi isikhathi senotice senyanga ezintathu.
Lanxa umsekeli kamongameli, umnumzana Emmerson Munangagwa ekhuthaze abogatsha lwezokulima ukuba balungisise lindaba ngokuphangisa kukhanya kungela lutho olwenziwayo.
Inkuthazo kaMunangagwa ize ngemva kokuba abammeli bezigaba betshengise ukukhathazeka ngesimo sabake basebenzela linkampani ye GMB, edale lephalamende ngoLwesithathu olwedluleyo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa
Izisebenzi lezi ezibalisa unkosazana Charity Sibanda, obesebenza iGMB koBulawayo, uthi bazahlala kulindawo baze baphiwe okungokwabo njalo bemangaliswa yikuqholoza kweziphathamandla zale nkampani ayisebenzele okweminyaka.
"Bakhanya bango Pharoah inhliziyo zabo zomile,akulaluthu abaluplanayo kodwa hayi,lathi asijahanga, sizalinda. Eleven years ngisebenzela i GMB,ngingumsekeli kamanager which is the board assistant in English".
Omunye wasebehlale kulindawo kusukela mhla ka 9 yonale inyanga, unkosazana Ester Gumbo, obesebenzela koBulawayo, uthi zizithulele iziphathamandla zenkampani le.
"Silokhe sikhonapha,hayi lami angijahanga ukubuyela emuva,ngifuna ukubuyela lemali yami.Hayi lokhe kungakakhanyi lutho kodwa hayi lokhe sibalindele,imali siyayifuna,asiyitshiyi,sibuyela layo emuva,yiyo esiyilandileyo".
Umnumzana Alec Mupande, odabuka eBinga, ubesebenzele linkampani ye GMB, okweminyaka elitshumi lambili, ese Chinhoyi.
Ulandisa phezu kobunzima abhekane labo selokhu yena labanye bakhe, babuyayo kulindawo, ukulanda imali yabo.
Ezaziyizisebenzi zeGMB ezitshengiselayo
"Hayi khonokho okokuncengisa khonokho.Okokuthi ungathola idola,omunye uyakuncengisa akuthengele amaputi,omunye ekuthengele ibhanzi khonokho. Sibuya lapha silande imali zethu lapha,kusukela ziphuma imali zethu khonapha.Yizo esizilandayo khonapha.Akula into abayikhulumayo, baphonkuhlala, basibophele amagedi, siphonkuhlala phansi. Noma ematoilets kasiyi, siphongucela kwamanye ama next door, ukuthi siyocela ukuthi sibone ukuthi singageza,sengeyanza njani".
Laye njengabanye uMupande, ukhala ngendlela iziphathamandla ezibaphatha ngayo.
"Engxenye,singazi ukuthi bona bacabanga ni,ngoba njengoba kabaphumi ukubuya bezosibona khonapha.Balokhe besivalele amagedhi,ukuthi sikwazi ukuthi bacabangani bephakathi khonaphna kasikwazi. Lapha sithembise ukuthi engxenye bangaphuma lapha,bebuye bazesibona lapha sikhulume labo,besitshele ukuthi lapha manje,sense njani.Kumbe bayasipromisa imali yini,akula".
Unkosazana Nokuthula Gwande Ncube, wakoBulawayo, uthi uzohlala kulindawo njengabanye, aze ayithole imali yakhe ayisebenzelayo.
"Hayi thina sikhona la,akula lapha esiya khona,till imali yethu ize iphume ikwanile,okwamalosoloso lokho,hayi we are saying no to it. Ngitshiye abantwabami babodwa khathesi bayakhala khonangale,bafuna umama wabo.I GMB iyala lemali yami,ngoba ukubuyela emuva akuncedi,ngiyahlala ngaphi labantwana. U landlord ufuni mali yakhe ye rent, angilayo imali yokuthi ngibhadale u landlord".
Kunje, uMaNcube ethi bengasayi esikolo abantwana ngoba eyiswela imali yokubahlawulela njengoba ubelokhu ethembele kuyonale evela kulenkampani ayisebenzela okweminyaka.
"Angila mali yokuthi ngibhadale i-school fees sabantwana,abantwana esikolo kufunakala izimali.Khathesi umtanami kumele a rejeste for Grade 7,ngiswela yona i $3 yokuthi ayerejesta ukuthi abhale u Grade 7. Angilayo i-$3,yikho ngilapha ngimelele imali yami ukuthi i GMB inginike imali yami. Because bayisebenzela limali,angiyiceli,yimali yami engayisebenzelayo, engayiginqelayo. Ngiyiginqele ngisebenza,ngiphinde ngiyiginqeleukuthi iphume futhi,its not fair".
Imizamo yokukhulumisana losaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi we GMB umnumzana Lawrence Jasi, yehlule, intathelizindaba zithenjiswa kokuphela ukuba zizathola impendulo.
Abohlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu, bebethembise ukukhipha umbiko phezu kwaloludaba, kodwa lalamhla lokhu akula okuphumileyo.
Lezi zisebenzi ezizehlala emasangweni eGMB, ngezinye zezedlula kancane inkulungwane lengxenye -1 600, ezimiswe umsebenzi kulandelwa isinqumo se Supreme Court ngenyanga kaNtulikazi nyakenye.
Udaba lwezisebenzi zeGMB ezitshengiselayo ngokulala phandle kwamahofisi ale inkampani